Ebreham ga-abụ nna ọtụtụ mba (1-8)
Aha Ebram ga-abụzi Ebreham (5)
Ọgbụgba ndụ ibi úgwù (9-14)
Aha Seraị ga-abụzi Sera (15-17)
E kwere Ebreham nkwa na ọ ga-amụta Aịzik (18-27)
17 Mgbe Ebram dị afọ iri itoolu na itoolu, Jehova pụtara n’ihu Ebram, sị ya: “Abụ m Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Mewe ihe dị m mma,* bụrụkwa onye a na-enweghị ihe a ga-eji taa ya ụta. 2 M ga-emezu ọgbụgba ndụ mụ na gị,+ m ga-emekwa ka ị mụbaa nke ukwuu.”+ 3 Ebram wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, Chineke gwakwara ya, sị: 4 “Lee, mụ na gị agbaala ndụ,+ ị ga-abụkwa nna ọtụtụ mba.+ 5 Aha gị agaghịzi abụ Ebram.* Aha gị ga-abụzi Ebreham,* n’ihi na m ga-eme ka ị bụrụ nna ọtụtụ mba. 6 M ga-eme ka ị mụọ nnọọ ọtụtụ ụmụ, meekwa ka ị bụrụ mba dị iche iche, ndị eze ga-esikwa n’agbụrụ gị.+ 7 “M ga-emezu ọgbụgba ndụ mụ na gị+ na nke mụ na ụmụ* gị n’ọgbọ ha niile. Ọ bụ ọgbụgba ndụ ga-adịru ebighị ebi, nke m ji ekwe gị nkwa na m ga-abụ Chineke gị nakwa Chineke ụmụ* gị. 8 M ga-enyekwa gị na umụ* gị ala ahụ i biri mgbe ị bụ onye mbịarambịa,+ ya bụ, ala Kenan niile. M ga-enye ya unu ka ọ bụrụ nke unu ruo mgbe niile. M ga-abụkwa Chineke ha.”+ 9 Chineke gwakwara Ebreham, sị: “Gị na ụmụ* gị n’ọgbọ ha niile emebikwala ọgbụgba ndụ mụ na unu. 10 Ihe a bụ ndụ mụ na gị na-agba, nke gị na ụmụ* gị na-agaghị emebi: A ga-ebi nwoke ọ bụla n’ime unu úgwù.+ 11 Unu ga-ebi úgwù. Ọ ga-abụ ihe àmà na-egosi na mụ na unu gbara ndụ.+ 12 N’ọgbọ unu niile, a ga-ebi nwa nwoke ọ bụla a mụrụ n’ụlọ gị úgwù n’ụbọchị nke asatọ.+ A ga-ebikwa nwoke ọ bụla bi n’ụlọ gị e ji ego zụta n’aka onye mba ọzọ úgwù, ya bụ, onye na-abụghị nwa* gị. 13 A ga-ebi nwoke ọ bụla a mụrụ n’ụlọ gị nakwa nwoke ọ bụla e ji ego gị zụta úgwù.+ Ihe àmà a nke dị unu n’ahụ́ ga-egosi na mụ na unu agbaala ndụ ga-adịte aka. 14 Ọ bụrụ na nwoke ọ bụla ajụ ibi úgwù, a ga-egbu ya. O mebiela ọgbụgba ndụ m.” 15 Chineke wee gwa Ebreham, sị: “Akpọzila Seraị*+ nwunye gị Seraị n’ihi na aha ya ga-abụzi Sera.* 16 M ga-agọzi ya, meekwa ka ọ mụọrọ gị nwa nwoke.+ M ga-agọzi ya, ọ ga-abụkwa nne ọtụtụ mba. Ndị eze ga-esi n’agbụrụ ya.” 17 Ebreham wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala, malite ịchị ọchị ma sị n’obi ya:+ “Nwoke gbara otu narị (100) afọ ọ̀ ka ga-amụ nwa? Sera, nwaanyị gbara afọ iri itoolu, ọ̀ ka ga-amụ nwa?”+ 18 Ebreham gwaziri ezi Chineke, sị: “Biko, gọzie Ishmel.”+ 19 Chineke wee sị: “N’eziokwu, Sera nwunye gị ga-amụrụ gị nwa nwoke, ị ga-agụkwa ya Aịzik.*+ Mụ na ya ga-agba ndụ. Ọ ga-abụ ọgbụgba ndụ ga-adịru ebighị ebi. Ọ ga-abụkwa ọgbụgba ndụ mụ na ụmụ* ya ga-agba.+ 20 Ma anụla m ihe i kwuru banyere Ishmel. M ga-agọzi ya, mee ka ọ mụbaa ma mụọ nnọọ ọtụtụ ụmụ. Ọ ga-amụta ndị isi iri na abụọ, m ga-emekwa ka ọ bụrụ nnukwu mba.+ 21 Ma, mụ na Aịzik,+ bụ́ nwa Sera ga-amụrụ gị n’ụdị oge a n’afọ ọzọ,+ ga-agba ndụ.” 22 Mgbe Chineke na Ebreham kwuchara okwu, Chineke hapụrụ ya pụọ. 23 Ebreham wee kpọrọ Ishmel nwa ya na ụmụ nwoke niile a mụrụ n’ụlọ ya na onye ọ bụla o ji ego ya zụta, ya bụ, nwoke ọ bụla bi n’ụlọ Ebreham, ma bie ha úgwù n’ụbọchị ahụ, otú Chineke gwara ya.+ 24 Ebreham dị afọ iri itoolu na itoolu mgbe o biri úgwù.+ 25 Ishmel nwa ya dị afọ iri na atọ mgbe o biri úgwù.+ 26 Ọ bụ n’ụbọchị ahụ ka e biri Ebreham úgwù, biekwa Ishmel nwa ya. 27 E biri Ebreham na ụmụ nwoke niile bi n’ụlọ ya úgwù, ma onye ọ bụla a mụrụ n’ụlọ ya ma onye ọ bụla o ji ego zụta n’aka onye mba ọzọ.
^ Na Hibru, “Na-eje ije n’ihu m.”
^ Ebram pụtara “Nna Dị Elu (E Buliri Nna Elu).”
^ Ebreham pụtara “Nna Ìgwè Mmadụ; Nna Ọtụtụ Ndị.”
^ Ọ ga-abụ na Seraị pụtara “Onye Na-ese Okwu.”
^ Sera pụtara “Ada Eze.”
^ Aịzik pụtara “Ọchị.”